फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - एक नाजी छायाँ
एक नाजी छायाँ राजव
ऊ मेरो बाको घर आवत-जावत चल्ने साथी थियो। एकताक ऊ मेरो घरमा आइरहन्थ्यो। र, बासँग एकाध घण्टा बस्थ्यो। बा पनि ऊ आएपछि हँसिलो बन्नुहुन्थ्यो। र, ऊसँग थुप्रै शीर्षकअन्तर्गत गफ थाल्नुहुन्थ्यो। विशेषत: धर्म, दर्शन र देश, देशान्तरका राजनीति र गतिविधिका गफहरु उहाँहरुबीच चल्थ्यो। बाटोमा देख्दा चाहिँ ऊ मलाई सोधिहाल्थ्यो,
'बालाई सञ्चै छ ?'
'हजुर सञ्चै छ।'
यो कुरो म बालाई पनि सुनाउँथें। र, बा खुसी हुनुहुन्थ्यो।
ऊ हाम्रो घरमा अक्सर साँझ आउँथ्यो। मेरो बा पनि उसको घरमा साँझा नै जानुहुन्थ्यो। बा घर अबेला आएको बेला आमाले कारण सोध्दा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो,
'राम कँड़ेलकाँ गएको थिएँ।'
सायद ऊ पनि आफ्नो घरमा यस्तै जवाफ दिँदै भन्थ्यो होला,
'हरिभूषणकाँ गएको थिएँ।'
तर एक साँझ बा र ऊबीच देशको राजनीतिसम्बन्धमा निक्कै चर्काचर्की चलेको थियो। रात राम्रै पर्दासम्म ऊ र बाबीच एउटै कुरोमा बहस चलिरह्यो। पछि ऊ गएपछि बाले निकै खल्लो मान्नु भयो। त्यो रात बाले केही खानु भएन। हामीलाई पनि निकै खल्लो लाग्यो।
त्यो रातपछि ऊ हाम्रो घरमा फेरि आएन।
त्यसपछि यता मैले उसलाई देख्न छाडेको पनि चार वर्ष भैसकेको थियो। त्यसकारण ऊ पनि दिवंगत भैसक्यो होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर, त्यस दिन फुटपाथमा उसको वृद्ध अनुहार एक्कासी देख्दा म झस्केको थिएँ। यथार्थमा ऊ मेरो अगाडि जीवित थियो। मलाई ऊसँग ' यतिन्जेल कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?' भन्ने सोध्न मन लागेको थियो। तर, मैले ऊसँग त्यस्तो केही सोधिन। बरु पहिलेझैं श्रद्धासाथ हात जोड्दै भनेको थिएँ,
'नमस्कार हजुर। '
यसपछि गम्किएर उसले सोधेको थियो,
'बाउको के छ नि खबर ? '
मैले दु:ख भरिएको मुद्रामा भनेको थिएँ,
'बा त वित्नु भयो...।'
तर उसले यस्तो भनेको थियो,
'बल्ल मरे छ त्यो कम्युनिष्ट ? '
त्यसपछि त्यो नाजी छायाँ हाँसेजस्तो लाग्यो मलाई ।